ဂဠုန်ဦးစော၏ ဇနီး မှ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် အသက်လျော်ကြေးလာပေးတဲ့အချိန် ဒေါ်ခင်ကြည် ပြောလိုက်တဲ့ သမိုင်းဝင် စကား - Real Gaming
ဂဠုန်ဦးစော၏ ဇနီး မှ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် အသက်လျော်ကြေးလာပေးတဲ့အချိန် ဒေါ်ခင်ကြည် ပြောလိုက်တဲ့ သမိုင်းဝင် စကား
ဂ ဠုန် ဦး စော သည် ကြိုး မိန့် ကျ ပြီး နောက် ကျ ဆုံး ခဲ့ ရ သော အာ ဇာ နည် ကိုး ဦး အား အ သက် လျော် ကြေး ပေး ရန် ၎င်း ပိုင် လက် ဝတ် ရ တ နာ များ ကို ရောင်း ချ ၍ ရ ရှိ ငွေကို အ ညီ အ မျှ ခွဲ ဝေ ပေး ရန် ဇ နီး ဖြစ် သူ ဒေါ် သန်း ခင် အား ထောင် တွင်း မှ မှာ ကြား ခဲ့ သည် ။
ဒေါ် သန်း ခင် သည် ခင် ပွန်း ဖြစ် သူ ဦး စော ၏ ဆ န္ဒ အ တိုင်း ပု ဂ္ဂိုလ် ရှစ် ဦးအား လိုက် လံပေး ပြီး နောက် ဒေါ် ခင် ကြည် အား အ ကျိုး အ ကြောင်း ပြော ပြီး အ သက် လျော် ကြေး ပေးရ သော အ ခါ ဒေါ် ခင် ကြည် က – “ရှင့် ယော က်ျား ကျ မ ယော က်ျား ကို လုပ် ကြံ လို့ ကျ မမု ဆိုး မ ဘ ဝ ရောက် ခဲ့ ရ ပါ ပြီ ။ ရှင် လည်း မ ကြာ မီ မု ဆိုး မ ဖြစ် တော့ မှာ မို့ မု ဆိုး မ ဘ ဝ တူ ချင်း မို့ အဲ့ ဒီ လျော် ကြေး ငွေ ကို မ ယူ ပါ ရ စေ နဲ့
ဦး စော အ တွက် သာ ဘ ဝ ကူး ကောင်း အောင် ကု သိုလ် ဒါ န တစ် ခု ခု ပြု လုပ် ပေး ပါ ” ဟုပြော ကြား ခဲ့ ကြောင်း သိ ရ ပေ သည် ။ အ မုန်း တ ရား ပွား များ ခြင်း မှ ကင်း ဝေး ကြ ပါစေ…….
သန်းဝင်းလှိုင် ၏ မဟာသီရိသုဓမ္မဒေါ်ခင်ကြည် မှ ကောက်နှုတ်တင်ပြပါသည်။
Credit – THAN WIN HLAING VIA TNL
ဂဠုနျဦးစော၏ ဇနီး မှ ဗိုလျခြုပျအတှကျ အသကျလြျောကွေးလာပေးတဲ့အခြိနျ ဒျေါခငျကွညျ ပွောလိုကျတဲ့ သမိုငျးဝငျ စကား
ဂ ဠုနျ ဦး စော သညျ ကွိုး မိနျ့ ကြ ပွီး နောကျ ကြ ဆုံး ခဲ့ ရ သော အာ ဇာ နညျ ကိုး ဦး အား အ သကျ လြျော ကွေး ပေး ရနျ ၎င်းငျး ပိုငျ လကျ ဝတျ ရ တ နာ မြား ကို ရောငျး ခြ ၍ ရ ရှိ ငှကေို အ ညီ အ မြှ ခှဲ ဝေ ပေး ရနျ ဇ နီး ဖွဈ သူ ဒျေါ သနျး ခငျ အား ထောငျ တှငျး မှ မှာ ကွား ခဲ့ သညျ ။
ဒျေါ သနျး ခငျ သညျ ခငျ ပှနျး ဖွဈ သူ ဦး စော ၏ ဆ န်ဒ အ တိုငျး ပု ဂ်ဂိုလျ ရှဈ ဦးအား လိုကျ လံပေး ပွီး နောကျ ဒျေါ ခငျ ကွညျ အား အ ကြိုး အ ကွောငျး ပွော ပွီး အ သကျ လြျော ကွေး ပေးရ သော အ ခါ ဒျေါ ခငျ ကွညျ က – “ရှငျ့ ယော ကျြား ကြ မ ယော ကျြား ကို လုပျ ကွံ လို့ ကြ မမု ဆိုး မ ဘ ဝ ရောကျ ခဲ့ ရ ပါ ပွီ ။ ရှငျ လညျး မ ကွာ မီ မု ဆိုး မ ဖွဈ တော့ မှာ မို့ မု ဆိုး မ ဘ ဝ တူ ခငျြး မို့ အဲ့ ဒီ လြျော ကွေး ငှေ ကို မ ယူ ပါ ရ စေ နဲ့
ဦး စော အ တှကျ သာ ဘ ဝ ကူး ကောငျး အောငျ ကု သိုလျ ဒါ န တဈ ခု ခု ပွု လုပျ ပေး ပါ ” ဟုပွော ကွား ခဲ့ ကွောငျး သိ ရ ပေ သညျ ။ အ မုနျး တ ရား ပှား မြား ခွငျး မှ ကငျး ဝေး ကွ ပါစေ…….
သနျးဝငျးလှိုငျ ၏ မဟာသီရိသုဓမ်မဒျေါခငျကွညျ မှ ကောကျနှုတျတငျပွပါသညျ။